Iifowuni ezisi-7 ezibekwe njengabaqokeleli kunye nezinto ezixabisa imali enkulu
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iifowuni ezisi-7 ezibekwe njengabaqokeleli kunye nezinto ezixabisa imali enkulu
Iifowuni ezisi-7 ezibekwe njengabaqokeleli kunye nezinto ezixabisa imali enkulu
Ukuthenga ifowuni kutyalo-mali uninzi lwabantu oluya kuchitha ixesha elininzi becinga kwaye becinga ngalo, ikakhulu ngenxa yokuba amaxesha ngamaxesha kuninzi, kukho iiapos isixa esikhulu semali ekufuneka sidlulisiwe. Ewe uninzi lwethu lunokuba madolw 'anzima ukugqibezela eso sigqibo sokuthenga, kodwa ezo zinto ziyinyani yezinto ukuba & nathi siphilela amava akutshanje kwaye abalulekileyo xa kufikwa kubuchwephesha beselfowuni. Kodwa ngelixa utyalo-mali lokuqala lufuneka ukuthenga ifowuni, uya kumangaliswa kukufumanisa ukuba kukho ingeniso enokubakho engenayo ethe yabandakanyeka ekuhambeni kwexesha - ukuba kunokwenzeka ugcine ifowuni yakho ikwimeko entle emva kokuyisebenzisa kangangexesha elithile .
Umzi mveliso osetyenzisiweyo weselfowuni unenzuzo enkulu, ngakumbi ukuba kunokwenzeka ubambe kwenye yezo zinto zinqabileyo. Ixesha linokwenza imimangaliso kwezinye izinto, kubandakanya iiselfowuni eziye zambalwa zaza zaya kude njengoko iminyaka iqhubeka-ukuzenza zinqabile ezinokukufumanela imali eninzi xa iimeko zilungile. Ngokuqinisekileyo, unokuhendeka ukuba uyithengise ngemali ekhawulezayo emva konyaka wokuqala okanye wesibini wobunini, kodwa ukuba wena & apos; uyakwazi ukulinda ixesha elide ngelixa uligcina likwimeko efanelekileyo ngalo lonke elo xesha, isixhobo sakho sinokugqibela ngokuhlelwa njenge umqokeleli kunye ne-apos; enexabiso elibalulekileyo.
INokia 8110 inokujongeka njengefowuni engaziwayo, kodwa ngenxa yomdlalo bhanyabhanya omnye kunye nexesha, le fowuni ngoku ingomnye wabaqokeleli abanzulu kunye nento! Ikhutshwe emva ngo-1996 yinkampani eyaziwayo yaseFinland eyakhuthaza uguquko lwefowuni yanamhlanje, iNoka 8110 yayiyeyona ikhethekileyo ngexesha layo ngenxa yefom yesilayidi eyayiyisebenzisa kuyilo lwayo. Ndiyabulela kwisigqubuthelo esityhilekileyo ukuze siveze iphedi yokudayala kwaye siphendule iifowuni ezingenayo, ekugqibeleni sabizwa ngokuba 'yifowuni yebhanana' ngenxa yokunqongophala kwayo kancinci xa isetyenziswa.
Ngoku, eyona nto yayiphakamisa kakhulu le fowuni ukuba ibe ngumqokeleli kunye ne-apos; yayikukuqala kwayo kwiscreen kwifilimu ye-blockbuster ye-1999 iMatrix, kwindawo apho uNeo wayeziswa iphakheji, ukuyifumana kunye neNokia 8110 ngaphakathi. Ifowuni iqhubeka ngokukhawuleza ukukhala, kwaye uNeo uyayithatha ifowuni xa ikhava izilayisha ngokuzenzekelayo. Ngokwenyani, nangona kunjalo, isiciko asivuleki sodwa, kodwa endaweni yoko, kuya kufuneka ulayishe isiciko phantsi, ngokuchaseneyo nesenzo esilayishwe entwasahlobo esisibona kwindawo yeMatrix.
Ukuba kunokwenzeka ukuba ungumnikazi wale nto, yinxalenye yembali yemovie ngenxa yokuba yenye yeefowuni ezimbalwa ezingalibalekiyo ukwenza ukuvela kumdlalo bhanyabhanya. Ukukhangela iNokia 8110 ikwimeko elungileyo kwi-eBay, uya kuthi ufumane ii-apos zivela kwixabiso, ngesibhengezo esinye esithi ii-apos zicela i- $ 500 yohlobo kraca, engazange ivulwe. Uninzi lweemodeli ezibalaseleyo zivela kwi- $ 55 ukuya kuthi ga kwi-200 yeedola kwabo bakwimeko entle.
Xa ubukele iimuvi kunye nemidlalo kamabonwakude edlalwa ngexesha le-1980 kunye nele-1990, ke wena kunye neapos mhlawumbi unokufumana iMotorola DynaTAC amatyeli aliqela. Yaziwa njenge fowuni yoqobo 'yezitena' ngenxa yobungakanani bayo obukhulu, obenzeke ukuba bubekwe njengendawo ephathekayo xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezikhutshwe ngexesha lazo, i-Motorola DynaTAC yayisaphuhliswa kude kwangowe-1947. Ngo-1973 xa 'utata weselfowuni,' uMartin Cooper, encedisa ukuqinisa indawo ye-Motorola DynaTAC & apos; kwiincwadi zembali ngokubeka umnxeba wokuqala kwiselfowuni kusetyenziswa uhlobo oluthile lomnxeba.
Ekugqibeleni, yayiyiDynaTAC 8000X eyaba yifowuni yokuqala yokuthengisa ebuyayo ngo-1984, kwaye ukusukela ngoko, iqhubekile ukunceda ukuzisa ixesha elitsha lonxibelelwano. Ukuza kuthi ga ngoku, kwimigangatho yanamhlanje, le 2.5 yezitena 'zezitena' zefowuni nguGoliyati, kodwa emva phayaa, ithemba lokukwazi ukufowuna naphina lalithathwa njengelixabiseke nangakumbi. Ngexesha lokufika kwe-1990s, i-Motorola DynaTAC yaqhubeka nokubona ukuphindaphinda okuninzi- ngokubonakala kumdlalo kamabonwakude 'Usindiswe yiBell,' ekugqibeleni wabizwa ngokuba yi 'Zack Morris Phone.'
Ngelixa uguqulelo oluninzi lwe-Motorola DynaTAC yaveliswa ngexesha lokuqhutywa kwayo, imodeli esebenzayo yefowuni yeediliya inokunyuka ngaphezulu kwe- $ 500 ngokomndilili. Leyo yeyona nto iphambili kutshintsho kuthathelwa ingqalelo into onokuyikhetha malunga nesixa esifanayo nee-smartphones zanamhlanje. Icandelo eliphambeneyo malunga nokukhetha le nto kukuba awuyithengi ukuze isebenze, kodwa endaweni yoko, yinto nje yomqokeleli kunye neapos eyenzelwe ukuvelisa umvuzo njengoko ixesha lihamba.
INokia 808 Pureview
Uninzi lweefowuni ezikolu luhlu zifikelele ekuthandeni kwazo nokuba ngoo-1980 okanye ngo-1990, zimbalwa kakhulu ibhetshi eza emva konyaka ka-2010. Ngokucacileyo, ezi fowuni zakudala 'zokuvuna' zihlala zivelisa ixabiso elininzi ngenxa yobudala bazo, nokuba zimbalwa kangakanani zisasasazwa. INokia 808 Pureview iye yehla kwimbali yeselfowuni njengenye yeefowuni zekhamera ezisebenza kakuhle ezakhe zakhutshwa, nto leyo inomtsalane xa ujonga indlela i-optics kunye neetekhnoloji yeelensi ephucuke ngokumangalisayo okoko yakhutshwa ngo-2012.
Inxalenye yesizathu sokuba iNokia 808 Pureview iyifowuni engalibalekiyo, nangona iqonga leSymbian kudala licinyiwe, kungenxa yokuba isapakisha ikhamera enye enzulu-inzwa enkulu ye-41-megapixel 1 / 1.2 'sensor ene-af / 2.4 Zeiss yonke -Iqela lelensi yeqela eli-1. Xa kuziwa ekuqhawuleni iifoto, ii-apos zisabhetyebhetye ngokumangalisayo ekubambeni ii-stills ezibukhali ezinokuphikisana nezixhobo ezilungileyo ezikhutshwe namhlanje. Kwaye kuphela kwayo okwenza ukuba ibe yingqokelela kunye nezinto zokuphela! Ikhamera ye-megapixel engama-41 kunzima ukuyazi xa sijonga izinto esinazo ngoku.
Nangona iNokia 808 Pureview ayifumani mali ininzi njengezinye iifowuni ezikolu luhlu, ixabiso layo alinayo & apos; yehlile kakhulu kule minyaka imbalwa ikhutshiwe. Ngapha koko, iimodeli zokusebenza zikwimeko entle zinokulanda phakathi kwe- $ 200 ukuya kwi-300 yeedola, kodwa uyazi ukuba ixabiso liya kunyuka kuphela njengoko ixesha liqhubeka nokudlula.
Sele sithethile malunga nokuba ukubonakala kweeselfowuni kwimiboniso bhanyabhanya kunokunceda ukwandisa ixabiso lazo ngokuhamba kwexesha. Into emangalisa ngakumbi kukuba le fowuni ilandelayo kuluhlu lwethu ivela kwenye iMovie yematrix. Ngelixa iNokia 8110 yayigxininisa imeko yayo njengomqokeleli kunye nezinto ngokubonakaliswa kwimidlalo bhanyabhanya yantlandlolo ye-Matrix ukusukela ngo-1999, i-Samsung SPH-N270 yeyona fowuni inomdla ngakumbi eyenze ukuba i-on-screen yayo iqale ngo-2003 ngokulandelelana, The IMatrix ilayishwe kwakhona. Ngeli xesha, nangona kunjalo, i-Samsung SPH-N270 yayisetyenziswa ngokwenene nguMorpheus kumdlalo bhanyabhanya.
Ngelixa i-movie ye-Nokia 8110 yayihlukile kubomi bayo bokwenyani, i-Samsung SPH-N270 ibonisa isenzo esifanayo sokulayisha intwasahlobo ngazo zombini iiprop kunye nemodeli yokwenyani. Ifowuni kunye nesiphatho sendlebe savela ngokucofa iqhosha, siveza isikrini phantsi kwaso kwaye senza ukuba uMorpheus enze umnxeba. Kwakunomdla ngakumbi ukubona isenzo esifanayo kunye nefowuni eyiyo. Ngomnxeba owakhutshwa ngo-2003, wawungekho & apos; ingakumbi nayiphi na inkqubela phambili kunabo bexesha lakhe, kodwa isenzo esilayishwe entwasahlobo sasipholile.
Enkosi ngexesha layo lescreen kwiMatrix Reloaded, i-Samsung SPH-N270 iqhubekile nokubona ixabiso layo inyuka ngokumangalisayo ukusukela oko yakhululwa kwasekuqaleni. Okwangoku, ungayifumana ifowuni ethengisa i- $ 750 kwi-avareji, enkosi kwinxalenye yendlela ibhetshi encinci yeefowuni eyenziweyo ukuba ihambelane nomdlalo bhanyabhanya kunye neapos - 10,000 ukuba zichane! Ukuba neemodeli ezimbalwa kakhulu ezivelisiweyo, uyazi ukuba ixabiso lefowuni liya kunyuka.
I-Apple iPhone ('2G' isizukulwana sokuqala)
Ukuba sesinye sezona zixhobo zotshintsho zakha zakhutshwa, sinetyala kakhulu kwinto eyasekwa ngo-Apple iPhone ngo-2007. Phambi kokuba ikhutshwe, ii-smartphones zazibukeka zintle, ziluhlobo olucothayo lwendlela ezisebenza ngayo, kwaye zazinga nyusi amava anomdla. Ewe kunjalo, konke kuguqulwe ngokwazisa kunye nokufika kokugqibela kwesizukulwana sokuqala se-iPhone, ngoku ebizwa ngokuba yi-iPhone 2G. Yasazisa kuninzi lweempawu zomgangatho wangoku we-apos, njengomboniso we-capacitive, ukuskrola kwe-kinetic, ukusondeza i-pinch, nokunye okuninzi!
Ukukhutshwa kwayo, ayibalulekanga kuphela kuyo yonke into, kodwa ikwazile ukuphakamisa amashiya kuba ngokungafaniyo nokhuphiswano lwayo olwafumana inkxaso-mali ngokusayina izivumelwano, i-iPhone yoqobo yayithengiswa $ 600 ngaphandle kwenkxaso nantoni na ukuthengwa. Okwangoku, oko akuzange kuthintele abathengi ekukhawuleziseni i-smartphone ngelo xesha. I-Apple yasekuqaleni ye-Apple ithathwa ngabaninzi njengenye yezixhobo zexesha lonke ezingqukuva, yiyo loo nto ii-apos zijongwa njengeyona nto iqokelelayo kunye ne-apos.
Nangona kusekho iiyunithi ezininzi ezidumileyo ekusasazeni kwaye zihlala zithengiswa kwi-Intanethi ngabathengisi, iimodeli zikwimeko entle kakhulu zisengayalela isixa semali. Ngcono okwangoku, kukho iimodeli ezisepakisheni yazo yoqobo eziye zalanda amawaka eedola- ke ixabiso lefowuni alithandabuzeki ukuba liya kuqhubeka lisanda njengoko ixesha lihamba.
IMotorola Aura R1
Sigcine enye yeefowuni zokugqibela kuluhlu lwethu lwento eyingqayizivele ngenene, njengoko idibanisa zonke izinto eziluncedo zale mihla zeselfowuni, zixutywe nenye yeendlela ezizezona zibalaseleyo kwifowuni. Ukuqala, i-Motorola Aura R1 yakhutshwa ngexesha le-smartphone ebuyela ngo-2008, kodwa yayingeyonto eyenziwayo ngaphandle kweselfowuni yakho esebenzayo-akukho ndawo igqibelele iyonke njengezinye zeefowuni zikaWindows ezijikelezayo ngexesha!
Yintoni ebangela ukuba i-Motorola Aura R1 ibe ngumqokeleli kunye ne-apos kukuba isebenzise izixhobo zepremiyamu kuyilo lwayo-njengentsimbi engenasici nesafire. Uninzi lulinganisa iRolex yeselfowuni ngenxa yendlela yayo eyahlukileyo yokuvula efana nokuvula kunye nesisombululo setyhula esiphakamileyo. Inkqubo ejikelezayo, ngokukodwa, itsala umdla kunye nokuqwalaselwa kuba iigiyasi ezenziwe eSwitzerland ngaphakathi zazenziwe ngentsimbi eqine iRockwell kunye neebheringi zebhola- ezifuna ingqalelo kwiinkcukacha esizibonayo kwiiwotshi ezininzi.
Ixabiso leMotorola Aura R1 alinciphisanga okoko lakhululwa ngo-2008, ukubona ukuba imodeli esemgangathweni yefowuni inokulanda ngokulula i- $ 1,000. Nangona bekukho ezinye iinguqulelo ezinqunyelwe zeefowuni ezikhutshiweyo, ezinje ngezo zazihonjiswe ngedayimani, uhlobo oluqhelekileyo lweAura A1 lusaqwalaselwa kakhulu njengomqokeleli kunye ne-apos ngenxa yokunqaba kwayo.
INokia 8800 Arte Carbon
Umntu unokuphosisa iNokia 8800 njengendlalifa emilise ixesha elide kwiNokia 8110 esele siyichazile ngaphambili kolu luhlu, kodwa enyanisweni, yayiyiprimiyamu eyakhiweyo yefowuni yesilayidi eqhuba inkqubo yokusebenza yeNokia & apos; s Series 40. Kwaye kunomdla ngokwaneleyo, yaphumelela ngeNokia N97. Ke kutheni iNokia 8800 ikuluhlu lwethu? Ewe, yiyo kunye nokwahluka okukodwa kwefowuni esikubandakanyayo-iNokia 8800 Carbon Arte Edition.
Ikhutshwe emva ngo-2008, iNokia 8800 Carbon Arte inezinto zeprimiyamu ezinje ngentsimbi engenacici, icarbon fiber, kunye neetanium kunye noyilo lwayo - inika umbono wokuba ibubuhle obungenakuphikwa kwifowuni yesilayidi. Iyafana nendlela ye-Motorola Aura R1 & apos; s, isenzo sokutyibilika apha kunye neNokia 8800 Carbon Arte senziwe ngaphandle kweebheringi zebhola ukufezekisa isindululo sayo esishukumayo, esityhila iphedi yaso yokudayela. Ngokwendalo, le nguqulo ikhethekileyo yeNokia 8800 iyaphawuleka kwifayibha yefayibha eyisebenzisayo, yongeza ukubonakala kwayo kunye nokuziva kwayo.
Kule mihla, yinto enqabileyo ukuyifumana, ukuyenza umqokeleli kunye ne-apos; kufanelekile ukubambelela kuyo ngenxa yexabiso elinakho ukuyala. Nangona uninzi lweemodeli ezisebenzayo zefowuni zinokuya ngokulula kwi-500 yeedola ngokomndilili, eseseyimali ehloniphekileyo kwifowuni ekhutshwe ngo-2008, iimodeli ezinesimo esihle kunye nokupakisha kwasekuqaleni kunokufumaneka ngokuthengisa kumantla e-1, 000 yeedola ngabathengisi abohlukeneyo. kunye nabathengisi kwakhona. Ngokucacileyo leyo lixabiso elibalulekileyo kwifowuni elingenako ukukhuphisana ngokuchasene neapos zangoku ze-smartphone xa kufikwa ekusebenzeni, kodwa isenoyilo olungaphelelwa lixesha kunye nokuziva kwepremiyamu.
Kwaye apho niyaya bantu, leyo & uluhlu lwethu ngoku! Zeziphi ezinye iifowuni ezingakhange zenze uluhlu lwethu lwangoku ucinga ukuba kufuneka lubandakanywe njengezinto zokuqokelela kunye neepos; Kukho & apos; mhlawumbi ezininzi phaya, kodwa nceda ushiye uluvo lwakho ngezantsi ukuze usixelele ukuba ucinga ntoni. Siza kuphinda siyiqwalasele kwakhona le nto kungekudala kwixa elizayo ukuqaqambisa abanye abalapha phandle, ke musani ukuthandabuza ukuba sazise ukuze sibaqwalasele kumjikelo olandelayo.
Ababhalisi be-YouTube TV ngoku banokunika iiveki ezi-2 zenkonzo yasimahla kubahlobo
Eyona nto ibalulekileyo yokubukela ye-Samsung Galaxy Watch kunye neGalaxy Watch Active
Idisney + kunye neApple TV + amaxabiso esicwangciso kunye nemiboniso ekusungulweni vs iNetflix, iHulu kunye neAmazon
Eyona-4 kaJulayi yokuthengisa e-2020
I-Verizon Wireless yandisa inkonzo yayo yokuNxibelelana kweFowuni yasekhaya
Iibhola zamandla zamva nje zeMophie kunye neapos; zinokuhlawulisa ii-iPhones kunye nee-Android ukuya kuthi ga kwi-18W isantya
Ukuthengiswa kwangaphambili kwe-Samsung Galaxy S20 kunye ne-Ultra 5G eVerizon, eAmazon, kwiT-Mobile, kweyona nto ithengwayo, okanye kwi-AT & T.
Eyona meko ilungileyo yeGalaxy S6